SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Manchester City vs Chelsea ka hor kulankooda habeen dambe… (The Blues oo la qadiyay!) – Gool FM
(Manchester) 09 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa marti gelinaysa naadiga Chelsea Habeen dambe oo Sabti ah kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa indhaha ku haysa inay ku dhammaysato todobaadkan iyadoo hoggaanka u haysa horyaalka Premier League.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Ingiriiska ayaa 2-0 kaga soo adkaatay kulankeedii ugu dambeeyey naadiga Everton waxaana farqiga goolasha ay ku qabtay hoggaanka horyaalka, maadaama ay isku dhibco yihiin Liverpool, inkastoo kooxda Reds ay markale la wareegi karto hoggaanka horyaalka haddii ay guul ka helaan caawa naadiga Bournemouth.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sporsmole ayaa shax isku dhaf ah ka sameeyay kooxaha Manchester City iyo Chelsea ka hor kulankooda habeen dambe, wiilasha Sarri ayaana la qadiyay iyadoo saddex xiddig oo qura laga siiyay shaxda.
Barcelona oo dhegaysanaya dalabyada u imaanaya Philippe Coutinho & Kooxda Real Madrid oo u sabab ah!